SP-USB02 SOICARE USB jụụ alụlụ aromatherapy ultrasonic dị mkpa mmanụ ụgbọ ala diffuser, China SP-USB02 SOICARE USB jụụ alụlụ aromatherapy ultrasonic dị mkpa mmanụ ụgbọ ala diffuser Manufacturers, Suppliers, Factory - Sunpai Industries Limited
SP-USB02 SOICARE USB jụụ alụlụ aromatherapy ultrasonic mkpa mmanụ ụgbọ ala diffuser
SOICARE USB jụụ alụlụ aromatherapy ultrasonic dị mkpa mmanụ ụgbọ ala diffuser
Igbe agba + Polyfoam
· 2-in-1 CAR OIL DIFFUSER: Tụnyere ndị ọzọ ụgbọ ala humidifiers, anyị USB ụgbọ ala mmanụ diffuser ka nke corrosion na-eguzogide eyi ihe onwunwe nke nwere ike ikwe ka ị dobe mkpa mmanụ ozugbo a diffuser. Ke adianade do, a ultrasonic humidifier ga-eme mmanụ etisasịwo na mmiri ọtụtụ ihe ndị ọzọ ngwa ngwa. Mgbe ị na-anụ ụtọ ikuku dị jụụ, ị ga-enwekwa aromatherapy dị mma izu ike.
· Ugboro abụọ ịgbanwee mfe OPERATE: Ugboro abụọ switches e mere. Ọ bụ n'ezie adaba n'ihi na eriri USB nwere ike ịchekwa na ala nke a aromatherapy diffuser. Ọ dị mfe ime ka onye mgbasa ozi a rụọ ọrụ, mmetụ mbụ iji malite alụlụ, nke abụọ iji gbanyụọ agba na aka nke atọ iji kwụsị iji ya.
· HUMIDIFIER NA-EME IWU: Nke a bụ obere humidifier na-ebugharị, ị nwere ike iburu ya n'ụzọ ọ bụla ịchọrọ. Ọ bụ ezi echiche maka ime ụlọ ịwụ ụgbọ ala njem ọfịs ụlọ ịsa ahụ ụlọ. Na mkpọtụ na-arụ ọrụ agaghị agafe 30db. Gaghị echegbu onwe gị mgbe ị na-akwọ ụra ma ọ bụ na-agụ akwụkwọ.
· 7-agba LED N'abalị ọkụ: 7 agba ọkụ ọkụ na-egosipụta, ụgbọ ala a humidifier ga-eji nwayọọ nwayọọ ịgbanwee agba nke ume iku ume n'oge ọrụ, nwere ike họrọ gbanyụọ dị ka onye mmasị. Ọ bụghị naanị na ihe dị mkpa mmanụ diffuser, kamakwa ezi nhọrọ ka icho mma gị ime ụgbọ ala na gị ọrụ.
· AH SH MGBE MGBE: ultrasonicgbọ ala ultrasonic anyị nwere ike ijide 60ml mmiri ma na-arụ ọrụ oge niile ruo awa isii. Ọ ga-akpaghị aka na-emechi ya mgbe mmiri pere mpe fọdụrụ, nke nwere ike igbochi ngwaọrụ ahụ mebiri emebi.
USB ụgbọ ala mkpa mmanụ diffuser
ọcha / oji
12-16 ml / awa
SP-G48 150ml asọmpi nkwalite ultrasonic mkpa mmanụ isi mmanụ diffuser
SP-G03B 180ml achara iko ewu ewu acorn udi esi ísì diffuser